Misorata anarana izao ho an'ny vatan'ny mpahay toekarena zandriny (serivisy mafy orina): Vaovao an-tsekoly amin'izao fotoana izao
Ampidiro izao ho an'ny Vacant Junior Economists (Internal Firm Service) ao amin'ny PricewaterhouseCooper (PwC)
Filed in Job by Staff editorial amin'ny 18 Jona 2021
Ampidiro izao ho an'ny Junior Economists (Serivisy anatiny mafy) 2021: ny PricewaterhouseCooper dia mandray mpiasa ho an'ireo mpahay toekarena tanora. Ny mpirotsaka hofidina dia tokony hanana farafahakeliny mari-pahaizana bakalorea amin'ny anglisy, matematika, siansa sosialy na fifehezana toekarena.
PwC ny orinasa dia manampy ny fikambanana sy ny olona hamorona ny soatoavina tadiaviny. Izahay dia tambajotran'ny orinasa any amin'ny firenena 158 misy olona maherin'ny 180,000 izay manolo-tena amin'ny kalitao amin'ny serivisy Assurance, Tax ary Advisory
Mitady isika Manager manara-maso ireo firotsahana an-tsehatra ahafahan'ny mpanjifanay mahatsapa tombony mifaninana amin'ny asany.
Ny sehatra ifantohana manokana dia misy ny fanatsarana ny asa, ny famolavolana modely ho an'ny miasa, ny famakafakana sy ny famolavolana ny fizotrany, ny fanatsarana ny rojom-panomezana, ny fitantanana ny vidiny, ny famakafakana ara-bola, ny fifandraisan'ny tetik'ady momba ny fifandraisana amin'ny mpanjifa (CRM) ary ny tetik'asa / fitantanana ny programa.
Izahay izao dia manangona mba hamenoana ny toerana etsy ambany:
Lohatenin'ny asa: Mpahay toekarena zandriny (Serivisy mafy orina anatiny)
Laharana fanovozan-kevitra: 125-NIG00104
Sampan-draharaha: Serivisy mafy orina anatiny
Manaova fikarohana qualitative sy qualitative eo ambany fitarihan'ny Economist, manome fidirana fikarohana sy famakafakana data ho an'ny Bulletin-PwC Nigeria Economic Bulletins sy famoahana Thought Leadership hafa
Araho maso ny firoboroboan'ny fironana manerantany sy an-trano amin'ny indostria isan-karazany, manantena mialoha ny fiovana eo amin'ny sehatry ny fandraharahana sy ny ara-bola ary koa ny fifandraisana eo amin'ny fitondran-tena amin'ny alàlan'ny teknika fanahafana.
Fampiharana fitaovana ara-teknika: famakafakana ny tsena, fanaingoana ny orinasa, paikady, fanombanana ny politika ary fanaovana maodely amin'ny famolavolana vahaolana ho an'ny mpanjifa
Miasa amin'ny fandraisana andraikitra sarotra isan-karazany manerana ny tamba-jotra PwC amin'ny tetikasa
Ampifandraiso sy ampidiro ny mpanjifa amin'ny fironana ara-toekarena sy indostrialy mipoitra mifototra amin'ny valin'ny fanadihadianay
Tazomy ny famoahana Thought Leadership sy ny data Macro; miantoka ny fahazoana miditra amin'ny tambajotra PwC Nigeria lehibe kokoa
Miaraha miasa amin'ireo vondrona orinasa hafa handefasana fampisehoana fampandrenesana sy fangatahana fampahalalana, misolo tena ny ekipa amin'ny fivoriana, manolotra ny fahafahan'ny PWC ho an'ny mpanjifa.
Fanabeazana: Degre amin'ny toekarena / vola / matematika
Fepetra takiana: 2: 1 sy ambony
Experience tsy mihoatra ny 2 taona traikefa amin'ny maha ekonomista mpikaroka na mpandalina
Ny fahaiza-manao ilaina:
Ny traikefa ilaina amin'ny asa, ny fahaiza-mandinika matanjaka amin'ny sehatry ny fanadihadiana ara-toekarena sy toekarena.
Ny fahalianana amin'ny olana manerantany sy anatiny ary ny fahafantarana ny tsena ara-bola.
Ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fifandraisana sy ny tena manokana ary ny fahaiza-manao fampisehoana, ao anatin'izany ny fahaizana miresaka olana ara-teknika sarotra amin'ny teny tsotra, am-bava sy an-tsoratra.
KITIHO ETO Raha mila fanazavana fanampiny.
Fanavaozana ny mpangataka lisitra fohy
Raha efa tafiditra anaty lisitra fohy ianao dia tafiditra eo am-baravarana ny tongotrao. Ary tonga ny fotoana tokony hamirapiratanao amin'ny dingana farany - ny tafatafa.
Na izany aza, mety ho resadresaka an-telefaona, Skype, na mivantana izany. Ary miankina amin'ny mpampiasa izany. Rehefa lisitra fohy:
Miezaha hahazo vaovao momba ilay orinasa.
Hamarino tsara fa manana fahitana mazava ianao. Miezaha mamantatra ny antony itiavanao ilay toerana manokana. Ary ahoana no mety hahatonga anao ho mety. Araho koa ny fangatahanao.
Ho fanampin'izany, mifandraisa. Resadresaka fa tsy famotorana. Mbola betsaka noho izany ny anao.
Mandeha lavitra ny fampiharana. Noho izany, manaova tafatafa maneso amin'ny namanao na manazaha miteny alohan'ny fitaratra.
Mahalana izany, fa indraindray ianao mahazo taratasy atolotra miorina amin'ny fampiharana anao. Manomboka mandamina ny fankalazana ianao, nefa tadidio ny hevitra sasany alohan'ny hidiranao ao amin'io fety fety io: raiso an-tsoratra izany.
Araho amin'ny antsipiriany ihany koa ny tolotra an-tsoratra. Ary alao antoka fa voatonona avokoa ny antsipiriany lehibe rehetra ary mametraha fanontaniana raha tsy azonao na inona na inona. Toy ny mombamomba ny asa, daty fanombohana, faharetana ary stipend, sns.
Mandefasa taratasy fisaorana ho an'ny mpampiasa, rehefa manaiky ny tolotra ianao.
Araho ihany koa ny mailaka manamarina ny daty nanombohanao ary maneho ny hafanam-ponao amin'ny anjara asanao vaovao.
Avy etsy ambony, zava-dehibe ny manamarika fa tsy miara-miasa amin'ireo orinasa ireo izahay. Izahay dia manome an'ity fampahalalana ity fotsiny mba hanampiana anao hahazo ilay asa nofinofisinao. Araka izany, rehefa mampihatra ianao dia ataovy izay hahazoana manao fikarohana bebe kokoa momba ilay orinasa. MIRARY ANAO HO TSARA VINTANA.
Fahadisoana hialana eo am-panaovana fampiharana
Betsaka ny olona tsy mahomby amin'ny fampiharana marobe tsy noho izy ireo tsy mahay, fa noho ny lesoka maro. Diniho izao manaraka izao:
Ampiharo ara-potoana, aza miandry ny fe-potoana.
Ataovy irery ny fizotran'ny fampiharana, aza mandefa olona hisorohana ny lesoka amin'ny data
Tazomy ny tenanao momba ny fampiharana
Hamarino tsara fa manome ny takiana ilaina rehetra ianao
Makà fotoana handefasana ny tsipiriany alohan'ny handefasana.
Ny mpifaninana dia tokony hangataka toerana iray, ny kandidà izay manandrana mangataka imbetsaka dia ho disqualifié ny fangatahany
Maimaimpoana ny fampiharana an-tserasera.
Fahabangan-toerana mafana ao Nizeria amin'izao fotoana izao
Fandraisana mpiasa federaly 2021;
Fandraisana mpiasa EFCC;
NIA Jobs any Nizeria;
Fandraisana mpiasa DPR;
Fandraisana mpiasa NNPC;
Fandraisana mpiasa any Nizeria tanteraka;
Fandraisana mpiasa an'habakabaka nizeriana;
Ny fandraisana mpiasa polisy nizeriana;
Fandraisana mpiasa amin'ny fonja nizeriana;
Fandraisana mpiasa amin'ny afo ho an'ny daholobe;
Ny fandraisana an-tanana momba ny fiarovana ny làlana federaly 2021;
Fandraisana mpiasa amin'ny fividianan-tany federaly 2021;
Fanangonana mpiasa amin'ny ladoany nizeriana;
Asa solika sy gazy any Nizeria;
Orinasa ambony eto Nizeria izay mandray mpiasa betsaka amin'ity volana ity;
ICRC Asa any Nizeria;
Na izany aza, mino izahay fa ity fampahalalana momba ny asa PricewaterhouseCooper (PwC) any Nizeria 2021 ity dia manampy anao? Maninona raha zarainao amin'ny namanao any io, amin'ny fikitihana ny bokotra fizarana eto amin'ity tranonkala ity.
Azonao atao ihany koa ny misoratra anarana havaozina ho fampahalalana bebe kokoa momba an'ity lohahevitra ity.
Raha mila anao izahay hanampy anao amin'ny fampahalalana vaovao nohavaozina amin'ny fotoana mety momba ny vataolana apply Now for Junior Economists (Internal Firm Service) 2021.
Omeo anay ny nomeraon-telefaoninao sy adiresy mailaka ao amin'ny boaty hevitra etsy ambany.
Inona ny fandraisanao anjara amin'ny Vacant Add Now for Junior Economists (Internal Firm Service) 2021? Mamporisika anao aho hampiasa an'io fahafahana hizara ity fampahalalana ity amin'ny hafa mampiasa ny Facebook, Twitter, or Google+. zarao bokotra eto ambany.
Fandraisana mpiasa PricewaterhouseCooper (PwC) ho an'ireo mpanampy amin'ny fitantanana diplaoma 2021
Ampiharo izao ho an'ny fandraisana mpiasa mitohy ao amin'ny PricewaterhouseCooper (PwC) 2021 fanavaozana
Ampidiro izao Ho an'ny mpampiasa IT Application Support Analyst ao amin'ny orinasam-panjakana iray an'ny fanjakana
Portal momba ny asa any PriceWaterHouseCooper 2021 www.pwc.com.ng
PricewaterhouseCooper Recruitment 2021/2022 Fampivoarana ny vavahady fampiharana
Fampandraisana an-keriny an'ny governemanta Lagos State 2021/2022 Fampiharana asan'ny mpampiasa
Tags: Ampidiro izao ho an'ny Vacant Junior Economists (Internal Firm Service) ao amin'ny PricewaterhouseCooper (PwC), Ampidiro izao ho an'ny Vacant Junior Economists (Internal Firm Service) ao amin'ny PricewaterhouseCooper (PwC) 2021, Vondrona mpahay toekarena zandriny (serivisy mafy orina), Lagos Jobs, PriceWaterHouseCooper
« Ampiharo izao ho an'ny fandraisana mpiasa mitohy ao amin'ny PricewaterhouseCooper (PwC) 2021 fanavaozana
Fandraisana mpiasa PricewaterhouseCooper ho an'ny tale mpitantana lefitra 2021 »